I-White Sands Resort Ocean View Villa 1 - I-Airbnb
I-White Sands Resort Ocean View Villa 1
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguWhite Sands Estate
I-villa yanamhlanje ezimeleyo ebekwe ngaphakathi kwiFamily ephethwe yi-White Sands Estate inika umbono omangalisayo wolwandle.
Izinto eziluncedo ze-Estate ziquka ichibi lokuqubha, i-cinema yokuhlala engama-50, iinkundla zentenetya, ukubeka uhlaza, indawo ye-BBQ, indawo yokudlala kunye negumbi lemidlalo.
Ucango lweSela olukwi-onsite lubonisa iimveliso esizidale ngothando kwiBrewery yethu, iDistillery kunye neDiliya.
I-White Sands Estate inikezela ngendawo yokuphumla enoxolo yokuphumla elwandle, kunye nokukhetha ukwenza imisebenzi esebenzayo ukuba uyafuna, ukusondeza usapho kunye, okanye ukwenza ukubaleka kothando. Ukhetho lolwakho.
Yonwabela iimbono ezintle kunye nezilwanyana zasendle ezininzi.
Emva kokuchitha imini elunxwemeni ubukele iinkozi zizingela ukutya kwazo ungangqengqa kwaye uphumle edekhini usela okubandayo ngaphambi kokuba uphume uhambe ngorhatya ukuze ubone iiwombats kunye ne-wallaby's.
Iminenga kunye neeDolphins zinokubonwa zibhabha kumanzi aluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngokuloba okugqwesileyo kwi-surf kunye namatye kuphela iimitha ukusuka kumnyango we-villa kunye nokufikelela kuluhlu lwehlabathi lokuloba lokuloba umgama ongama-30 okuqhuba.
I-Estate ibonelela ngengqekembe yemali kwisiza esisebenza kwiLaundry.
Nceda ujonge iiyure zokuvula Indawo yokutyela ngaphambi kokuhlala kwakho.
I-White Sands Estate ibekwe kwindawo engasese yoNxweme oluseMpuma yeTasmania, inoLwandle lwayo olucocekileyo kunye nomphambili wonxweme, Ilungele ukuloba, ukuhamba kunye neminye imisebenzi emininzi. kucango olukwigumbi elingaphantsi komhlaba.Imisebenzi yasekuhlaleni ibandakanya idama lokuqubha, ukuhamba ehlathini, ukuhamba elunxwemeni, iSnorkeling (izixhobo zeBYO) Ukuloba kunye neenkundla zethu zentenetya.
Umbuki zindwendwe ngu- White Sands Estate
I-key pickup iya kuvela kwiibhokisi zokutshixa ezingaphandle kwendawo yokungena enkulu yesakhiwo. Uya kunikwa ikhowudi kunye nolwazi olongezelelweyo ukufikelela kwibhokisi yokutshixa emva kokuqinisekiswa kokubhuka.